ဓ်ါတ်ပုံများအား ဗွီဒီယို လုပ်ကြမယ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
28-01-2009, 03:36 PM
ဓါတ်ပုံ တွေကို နောက်ခံသီချင်းလေးတွေနဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်အဖြစ် လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲလေးကိုဘဲ သုံးတယ်ဗျာ။
ဒေါင်းချင်ရင်တော့ ဒီမှာ လေ။
ဒါလေးက portable software လေးဆိုတော့ အဲဒါလေးကို ဖွင့်လိုက်ရုံဘဲလေ။
Copy ကူးပြီး Desktop ပေါ်မှာ Paste လုပ်ထားတယ်လေ
အနီရောင်နဲ့ ၀ိုင်းထားတဲ့ pro show producer software လေးကို ကလစ်၂ချက် လုပ်ပြီးရင် ဟောဒီလို ပုံက ပြမယ်
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် Monitor Resolution ကတော့ 1024 x 768 ဖြစ်မှ ရမှာနော်။
အနီရောင် ၀ိုင်းထားတဲ့ Done ဆိုတာလေးကိုနှိပ်။ ပြီးရင် ဟောဒီအောက်ကပုံလေးပြလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ Show Slider ဆိုတာပြနေခဲ့ရင် Tool Bar ထဲက Window အောက်က Slide list Display ထဲက Show Time Line ကိုနှိပ်
ဟော ဒီမှာ ဓါတ်ပုံ ဆလိုက်ရှိုး အတွက်ပီဒီအက်ဖ်လေး
Last edited by paulgyi; 12-04-2009 at 08:51 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 58 ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ကိုသဝေထိုး, ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, စစ်တွေသားချေ, ညီခဝေ, တက်တူး, ဖိုးတာတေ, မင်းကိုထွေး, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ရန်ရန်လင်း, ရာမ, လူမုန်း, ဝင်းကျော်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, သရက်သီး, အမြင့်ပျံလင်းယုန်, ဇော်ရဲပိုင်, မေဦးမွန်, မောင်ဘိုတောက်, မောင်မျိုးသာ, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, အောင်မိုးထွန်း, ဖြိုးခန့်, ဖြိုးယံလေး, နှင်းဆီ, amaung344, aungzaw, AZM, bonge, bothu, centurymg, creative2020202020, htoo war, kokomaung.ko28, konaung, kozaw.dagon, kyawmin, linthuraaung, lumpuk, MG MYO, minthumon, moe gyi, moe san dar, nyinyi mt, pannuko, pho oo, Phoekwarlay, sawjonnie, Thein Than, thetzin, thurein, tu tu, xxx, zawwinoo, zin min aung
28-01-2009, 03:48 PM
အဲလိုလေးပြပြီးရင် အောက်ကပုံအတိုင်း ဆက်လုပ်ကြမယ်လေ။
ကဲစပြီး ဓါတ်ပုံတွေကို Slider Timeline ထဲ ထည့်ရအောင်
အမှတ်စဉ် ( 1 ) မိမိ ကွန်ပြူတာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဖိုင်အားရွေးချယ်ပါ။
အမှတ်စဉ် (2) တွင် ပြထားသော Box ထဲမှ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံများအား ရွေးချယ်ပြီး
အမှတ်စဉ် (3) Box ထဲသို့ Mouse ဖြင့် ဖိနှိပ်ပြီး ဆွဲချလိုက်ပါ
Slider Timeline ထဲ ရောက်ပြီးသားဓါတ်ပုံ ကို မကြိုက်နှစ်သက်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ပြောင်းချင်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖယ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဓါတ်ပုံနေရာကို Right Clip လုပ် ပြီးရင် Delete ဆိုတာလေး နှိပ်လိုက်ရုံဘဲလေ
ရှေ့နောက်ပြောင်းချင်ရင်လည်း မောက်စ်နဲ့ ကလစ်ဆွဲပြီး ပြောင်းလိုက်ရုံဘဲလေ။
Last edited by paulgyi; 28-01-2009 at 04:57 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, တက်တူး, ဖိုးတာတေ, ယွန်းယွန်း, ဝင်းကျော်ဦး, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, အောင်မိုးထွန်း, centurymg, Gateway, MG MYO, minthumon, moe san dar, ngwe, pho oo, sawjonnie, thetzin
28-01-2009, 03:57 PM
စောစောကပြောထားတဲ့ ဓါတ်ပုံထည့်တဲ့အတိုင်း သီချင်းလေးတွေ ထည့်မယ်နော်။
အဲဒါဆိုရင် စမ်းပြီး သီချင်းလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကို အကြမ်းနားထောင်ကြည့်ရအောင်။
အဲ မဟုတ်သေးဘူး သီချင်းမှားနေလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မကြိုက်တဲ့ သီချင်းဖြစ်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ့်Right Clip နှိပ်ပြီး Remove song tracks
တစ်ပုံနဲ့ တစ်ပုံကြားမှာ Transation ပြောင်းတာလေးတွေ လုပ်ကြည့်ကြရအောင်လေ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, ဖိုးတာတေ, ယွန်းယွန်း, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, centurymg, Gateway, kokomaung.ko28, MG MYO, minthumon, moe san dar, ngwe, pho oo, sawjonnie, thetzin
အနီရောင်နဲ့ ၀ိုင်းထားတာလေးကို ကလစ်နှိပ်လိုက်လေ အဲဒါလေးနှိပ်ရင် အောက်ကပုံမျိုးလေ
အဲဒီတဲက ကိုကြိုက်တဲ့ Transition လေးကို pointer တင်ကြည့်လေ ။ စိတ်ကြိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ကလစ်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်။ အဲလိုမျိုးတွေကို ပုံတွေကြားမှာ
အဲလိုလုပ်ပြီးရင် တစ်ခါပြန်ပြီး Play ကြည့်လေ မကြိုက်မချင်းပြင်ပေါ့။
ကဲစိတ်ကြိုက် ပြောင်းပြီးရင်တော့ စာတန်းထိုးလေးတွေ ပေါ်အောင်ထည့်ကြည့်ရအောင်။
ပထမဆုံး ဓါတ်ပုံကို မောက်စ်နဲ့ ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ် လေ။
Last edited by paulgyi; 28-01-2009 at 04:56 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, ဖိုးတာတေ, ယွန်းယွန်း, သရက်သီး, ဇော်ရဲပိုင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, centurymg, Gateway, kokomaung.ko28, MG MYO, minthumon, moe san dar, ngwe
28-01-2009, 04:51 PM
အဲဒီလိုပေါ်နေရင် ABC Captions ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လေ
အမှတ်စဉ် ( 1 ) နေရာမှာ ပွိုင့်တာချပြီး စာရိုက်ပေါ့ ။ မြန်မာစာလုံးပေါ်ချင်ရင် တော့ font Box မှာပြောင်းပြီးတော့ ရိုက်ပေါ့ ။တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော် မြန်မာစာလုံးကို ရိုက်ရင် ရိုက်နေတဲ့ Text box ထဲမှာတော့ မပေါ်ဘူးနော် အင်္ဂလိပ်လိုဘဲပေါ်မှာနော်။အောက်က ဓါတ်ပုံပေါ်မှာမှ ပေါ်မှာနော်
အမှတ်စဉ် (2) ကတော့ ကာလာ ပြောင်းတာလေ set color ကိုနှိပ် မိမိကြိုက် ရာကို ရွေးလိုက်ပေါ့
အမှတ်စဉ် (3) ကတော့ အဲဒီ စာတန်းလေးကို လှုပ်ရှားအောင်လုပ်ရတာလေးပေါ့။
အ၀င် အထွက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ပေါ့
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာလေးရွေးပြီး တော့ Apply လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့
ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, ဒဿဂီရိ, ဖိုးတာတေ, ယွန်းယွန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, centurymg, Gateway, karen B boy, kkh, kokomaung.ko28, MG MYO, minthumon, moe san dar, thetzin
28-01-2009, 05:06 PM
စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ Done ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လေ။
အိုကေ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဖြစ် ပြန်ပြီး Play ကြည့် ။ခံစားကြည့်။
မကြိုက်ရင် ပြန်ပြင် အဲဒီအတိုင်းဘဲ ပြန်နှိပ် လွယ်တယ် ပြင်ရတာ။
တခြား ဆော့ဖ်ဝဲယားတွေလို မခက်ဘူး ။
ကျန်တာတွေက တော့ ဥာဏ်ရှိသလိုသာ အသုံးချပေတော့ ။တော်တော်များများ လုပ်လို့ရပါတယ်။
အခုပြောတာတွေကတော့ လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်နိုင်တဲ့ ဥမမာ တွေကိုဘဲ အလွယ်တကူ လုပ်လို့ ရအောင်လို့ ဘဲ နမူနာ အနေနဲ့ ပြောတာပါ။
ကဲ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုပြီတော့ ဗွီဒီယို ဖိုင်လေး လုပ်ကြည့်ရအောင်
Tool Bar ထဲက Create အောက်က မိမိစိတ်ကြိုက် Format ကို ရွေးပေါ့နော်
ကျွန်တော်ကတော့ Video File ကိုဘဲ ရွေးလိုက်တယ်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, တက်တူး, ဖိုးတာတေ, ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, centurymg, Gateway, kokomaung.ko28, MG MYO, minthumon, moe san dar, thetzin
28-01-2009, 05:20 PM
မိမိစိတ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုဘဲ သိမ်းလိုက်တော့လေ။ Save နှိပ်ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံလေးလိုပြလိမ့်မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, တက်တူး, ဖိုးတာတေ, မောင်သံသရာ, centurymg, Gateway, kokomaung.ko28, MG MYO, minthumon, moe san dar, thetzin
အဲလိုပြနေပြီဆိုရင် တော့ ခဏစောင့် ။
ပြီးရင်တော့ ပိတ်လိုက်တော့ ။
ပြန်ပြင်ချင်သေးရင်တော့ Save ပေါ့။
မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ Don’t Save လုပ်လိုက်ပေါ့။
အဲဒါဆိုရင် မိမိရဲ့ photo slide show လေးကို မိသားစု နဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ပြလို့ရပြီပေါ့။
အောက်ပါအသင်းဝင် 26 ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, စစ်တွေသားချေ, စည်သူဇော်, စမ်းစိမ့်လတ်, တက်တူး, ဖိုးတာတေ, ရန်ရန်လင်း, အိုင်တီကောင်လေး, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, aunglinn, AZM, centurymg, Gateway, ko myo, kokomaung.ko28, MG MYO, min kyaw min, minthumon, moe san dar, sawjonnie, soemoekyaw007, thetzin, YKNKTO
29-01-2009, 03:01 AM
ပို့စ် 1 ခုအတွက် 11 ဦးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ ကျွန်တော်က အဲဒါလေးကို ဘာမှန်းမသိသေးဘူး စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ..... ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိပေါ့......
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ မင်းဆွေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ညီထွေး, မိုးပြာပြာ, အိုင်တီကောင်လေး, မောင်သံသရာ, aunglinn, Gateway, kokomaung.ko28, minthumon, moe san dar, paulgyi
Find More Posts by မင်းဆွေ
31-01-2009, 07:14 PM
ပို့စ် 33 ခုအတွက် 184 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by မင်းဆွေ
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ tapaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, တက်တူး, အိုင်တီကောင်လေး, မောင်သံသရာ, Gateway, minthumon, pannuko, paulgyi, pho oo
Find More Posts by tapaung
အကိုရေ သီချင်းလေးရှည်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလေးလဲ သိလို့ရမလား
အဲဒီသီချင်းထည့်တာလေးပဲ (တချို့သီချင်းတွေကရှည်တော့ အဆုံးထိထည့်လို့မရဘူး)
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ soemoekyaw007 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, တက်တူး, ဝင်းကျော်ဦး, အိုင်တီကောင်လေး, မောင်သံသရာ, Gateway, minthumon, moe san dar, paulgyi, thetzin
အစ်ကိုရေ ဒီကောင်နဲ့ ယူလိနဲ့ဘယ်လိုကွာဟချက်လေးတွေရှိလည်း ပြောပြပေးပါလား ။ ဒီကောင့်ကိုတော့ မစမ်းရသေးဘူး ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ပြောပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်နော် ...
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ thurein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, တက်တူး, အိုင်တီကောင်လေး, မောင်သံသရာ, centurymg, Gateway, minthumon, moe san dar, paulgyi
ကျွန်တော်ကတော့ ယူလိကို မသုံးပါခင်ဗျား ထို့အတွက်ကြောင့် ကွာဟချက်ကို ကျွန်တော် မသိပါခင်ဗျား
ကျွန်တော်သုံးဘူးသည်မှာ Power Driector6ကို သုံးပါသည်။ သို့သော်လည်း ဓါတ်ပုံများကို ဗွီဒီယိုဖိုင်လုပ်ရာတွင်
ယခု ဆော့ဖ်ဝဲယားလောက် မလွယ်ကူပါ။
ကျွန်တော်လည်း အစ်ကိုပြောတဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာမတွေ့သေးပါ ။ ဓါတ်ပုံများကို အချိန် ရှည်ပေးလိုက်ရင် ရပါတယ်
အချိန်ကိုလည်း တစ်ပုံချင်းစီ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အခုမှ စမ်းသပ်နေတုန်းဘဲ ရှိပါသေးတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဖိုးတာတေ, အိုင်တီကောင်လေး, မောင်သံသရာ, centurymg, Gateway, minthumon, moe san dar, thetzin
Originally Posted by soemoekyaw007
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့..photo slideshow လုပ်တဲ့အခါမှာ သီချင်းကို ဖြတ်တာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး..
တစ်ကယ်လို့ သီချင်းက ရှည်နေတယ်ဆိုရင် photo ကို အချိုန်ပေးညှိပေးရတယ်..အချိန်က ၂ ခုရှိတယ်..
အချိန်ညှိမယ်ဆိုရင် photo ကို slideshow ဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အချိန်ကြာစေတာနဲ့ Translation ကို တစ်ပုံနဲ့ တစ်ပုံပြောင်းတဲ့အခါမှာ သူ့အထဲမှာ ပေးထားတာက 3.0second ပေးထားတာ တွေ့ရတယ်..3.0 second ဆိုတာ တစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံပြောင်းတဲ့ အချိန်မှာ အရမ်းကို မြန်စေပါတယ်..အဲဒီအတွက်5second လောက်ပေးထားတယ်ဆိုရင် တော်ကာကြတယ်..photo ကိုလည်း ဒီတိုင်းပါပဲ...
ဘယ်လိုပြောင်းရလည်း ဆိုတော့ အောက်ကပုံမှာ နီလေးနဲ့ ၀ိုင်းပြထားပါတယ်..
photo ကို အားလုံးကို အချိန်ညှိချင်ရင်တော့ အားလုံးကို select ပေးပြီး..အချိန်ညှိလိုက်ရင် ရပါတယ်..အချိန်းလေးကို double click ပေးလိုက်ရင် ပုံထဲကလို အချိန်ညှိလို့ရပါပြီ.
Translation ကို အချိန်ညှိမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်ကို double click ပေးလိုက်ထောက်လိုက်ရင် ရပါပြီ..
ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်..သီချင်းကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ movie maker တို့ Ulead တို့နဲ့ ဖြတ်ပေါ့..
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ မင်းကိုထွေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, စည်သူဇော်, တက်တူး, ဖိုးတာတေ, ရှင်းလေး, အိုင်တီကောင်လေး, မောင်သံသရာ, centurymg, Gateway, minthumon, minwain, moe san dar, thetzin, zero6
Ulead နဲ့ Power Driector6ဘာကွာလည်းလေ ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ကောင်းကောင်းတော့မသိဘူးဗျ..
ထင်တာလေး ပြောကြည့်မယ်.. Power Driector6ကိုတော့ အခုမှ စသုံးဖူးတော့ ကောင်းကောင်းနာမလည်းဘူး..
Ulead ကတော့ မျိုးအစားလိုက်ရှိပါတယ်..Ulead 1/2/3 ..12 ထိ ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်..ကျွန်တော် သုံးဖူးတာကတော့ Ulead 3.0 .Ulead 9/ Ulead 11 အဲဒီသုံးခုတော့ သုံးဖူးတယ်..Ulead3ကတော့ photoshop နဲ့ တူတယ်..photo တွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်တယ် Ulead9နဲ့ 12 ကတော့ တူတူပဲ ..Translation လေးနဲနဲလေး ပြောင်းသွားတယ်.Ulead 9/12 ကတော့ photo slideshow လုပ်တယ်.
Ulead 9/12 ကတော့ photo slideshow လုပ်တာတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး..သီချင်းတွေ ဖြတ်တယ်..
အကတွေ ဖြတ်ပြီး သီချင်းနဲ့ တွဲထည့်တာတို့ပေါ့..မှုရင်း vidoe မှာပါလာတဲ့ မှုရင် အသံကို ဖျောက်ပြီး ကိုထည့်ချင်တဲ့ သီးချင်းစာသားကို ထည့်တာတို့ လုပ်လို့ရပါတယ်..ကာလာအိုကေတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်..
English ကားတွေမှာ မြန်မာစားတမ်းထိုးလုပ်တာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်..ကာလာအိုကေ ဆိုလို့ ရအောင်တော့ လုပ်ဖူးတယ်..သီချင်းစာသားနဲ့ သံစဉ်နဲ့ တော်တော်ညှိယူရတယ်..ဇာတ်ကားတော့ မလုပ်ဖူးပါတယ်..လုပ်မယ်လို့တော့ စိတ်ကူတယ်...တစ်ယောက်တည်း မနိုင်တာနဲ့ မလုပ်ဖြစ်တော့တာ..
Power Driector6ကတော့ ကျွန်တော်အထင် photo slideshow တစ်ခုပဲ လုပ်လို့ရတယ်ထင်တယ်..
Translation တွေတော့ တော်တော်စုံတယ်..လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လုပ်လို့ကောင်းမယ်..ကျွန်တော်လည်း ကိုတစ်ပေါင်း တင်ပေးမှ စလုပ်ဖူးတော့ ကောင်းကောင်းနာမလည်းသေးပါဘူး..ကျွန်တော်ပြောတာ အမှားတွေပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ..ကျွန်တော်ထင်တာလေးတွေပြောပြတာပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ မင်းကိုထွေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, တက်တူး, ဖိုးတာတေ, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, centurymg, ko lin, Minn Khant, minthumon, moe san dar, thurein, zero6
အစ်ကိုသိသလောက်လေး ယူလိကို သင်ပေးပါလား
ဖိုးတာတေ, မောင်သံသရာ, centurymg, moe san dar, thetzin
သူရိန်နော်သူရိမ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ။ ဘာပဲပြောပြော ခုလို စိတ်ရှည်ရှည်ရှင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် Ulead ကိုတော့ သုံးဖူးတယ်ဗျ ။ ဒါပေမဲ့ သိရုံလောက်ပါ ။ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သုံးချင်တယ်ဗျာ ။ စာအုပ်လေးဘာလေး ဘယ်မှာရှာလို့ ရမလည်းဗျာ ။ ကျေးဇူးပြုပြီး သိရင်ကူညီပါဦး ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ thurein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဖိုးတာတေ, မောင်သံသရာ, moe san dar
ဘယ်လို သုံးရတယ်ဆိုတာလည်း ပုံလေးနဲ့ ရှင်းပြချင်ပါတယ်....ကျွန်တော် စက်က အခု လောလောဆယ် Ulead
ကို install မလုပ်ရသေးဘူး....Ulead က စက်လေးတော့ ကျွန်တော်လည်း မသုံးတာ တော်တော်ကြာပါပြီ...
အရင် စက်နဲ့ တုန်းကတော့ သုံးတယ်ခင်ဗျာ..အခုစက်က ဘာprogram မှ ကောင်းကောင်း install လုပ်လို့ မရပါဘူး....တစ်အားကို လေးတယ်....photoshop တောင် ကျွန်တော် တစ်ခါလုပ်ချင်ရင် အကြာကြီး စောင့်ရတယ်ဗျာ...ပြီးတော့ ဟန်းသွားကော...အဲဒါနဲ့ Ulead လည်း လေးတော့ မသုံးဖြစ်လိုက်ဘူး...
တစ်နေ့တော့ ကျွန်တော် ရအောင် တင်ပေးပါမယ်ဗျာ....သူငယ်ချင်းစက်ကို ခဏသုံးပြီးတော့ တင်ပေးပါမယ်...
ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ပုံလေးနဲ့ ရှင်းပြပါမယ်...
သိတဲ့လူလည်း တော်တော်များများရှိပါတယ်....ကျွန်တော်လည်း လေ့လာနေဆဲပါပဲ....သိတဲ့လူတွေတော့ စာအုပ်တွေ...လုပ်နည်းတွေ တင်ပေးလိုက်မယ်ထင်တယ်...ကျွန်တောလည်း ရှာပြီး တင်ပေးပါမယ်....
ကိုလေးအောင်, တက်တူး, ဖိုးတာတေ, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, AZM, centurymg, ko lin, minthumon, moe san dar, paulgyi, thetzin, thurein, zero6
17-02-2009, 11:52 AM
ပို့စ် 202 ခုအတွက် 1,322 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
နောင်တော် paulgyi ရေ နောင်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း မြန်မာစာလုံးပေါ်အောင်ရိုက်တာ မရဘူးဗျ ကော်ရှင်ဘတ်ပဲပေါ်နေတယ် Text box ထဲမှာလည်းမပေါ်ဘူး အောက်က ဓါတ်ပုံပေါ်မှာလည်းမပေါ်ဘူး... ကူညီပါအုံးဗျ.....
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ရန်ရန်လင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖိုးတာတေ, ဖိုးထိန်, မောင်သံသရာ, minthumon, moe san dar, paulgyi, thetzin
Find More Posts by ရန်ရန်လင်း
Originally Posted by ရန်ရန်လင်း
ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာက ညီလေးစက်မှာ ယူနီကုဒ် ဖွင့်ထားတယ်ထင်တယ်လေ
စည်သူဇော်, မောင်သံသရာ, minthumon, moe san dar, thetzin
ယူနီကုဒ်လည်း ဖွင့်မထားဘူးအစ်ကိုရ .....ကော်ရှင်ဘတ်ပဲမြင်နေရတယ်.....ဘာကြောင့်မှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး
ဖိုးထိန်, မောင်သံသရာ, march, minthumon, moe san dar, paulgyi, thetzin
27-03-2009, 06:17 PM
ကျွန်တော်ဆွဲတာဝင်ကိုကိုမရဘူးအစ်ကိုAccess has been denied
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ စည်သူဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
march, minthumon, moe san dar, thetzin
window video maker ထဲမှာရော မြန်မာလို ရိုက်လို့ ရမလား မသိဘူးနော်
ရရင် ပြောပြပေး ကြပါအုံး
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ htweko အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, minthumon, moe san dar, thetzin
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 27 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အကိုရေ..အဲဒိဓါတ်ပုံတွေထဲမှာမိမိကြိုက်ထဲသီချင်းထည့်ချင်ရင်...MP-3 မှထည့်လိုရမယ်ဆို..အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကို
MP-3 Install လုပ်လို့မလို..ကူညီပြီးပေးလို့ရရင်ပေးပါလားခင်ဗျာ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ nankoko အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by nankoko
ဆောရီးအစ်ကိုရေ ကျွန်တော် လည်း အလုပ်မအားလို့ သိပ် မထိုင်ဖြစ်နေတာပါ ။
အမ်ပီသရီး အင်စတောလုပ်တယ်ဆိုတာကို နားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
အစ်ကို သီချင်းထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းဘဲ အမ်ပီသရီးသီချင်းကို ဆွဲထည့်လိုက်ယုံဘဲလေ။
ဖိုးတာတေ, မောင်သံသရာ, minthumon, moe san dar, thetzin
အစ်ကိုရေ လင့်ပြန်စစ်ပေးပြီးပါပြီ ကောင်းပါတယ် အစ်ကို
ကျွန်တော်လည်း မအားလို့ သိပ်မထိုင်ဖြစ်တာ ဆောရီးနော် အစ်ကို
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖိုးတာတေ, မောင်သံသရာ, moe san dar, thetzin
Originally Posted by htweko
ရပါတယ် ဗျာ ကျွန်တော်ပြောတာက window move maker ကိုပြောတာနော် အစ်ကို
အစ်ကိုပြောတဲ့ window video maker ကိုတော့ မသိဘူးအစ်ကိုရ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖိုးတာတေ, မောင်သံသရာ, moe san dar
window movie maker နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာသေသေချာချာပြောပြပေးပါလား
နောက်ပြီးတော့ CD burn တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရော ပြောပြပေးပါလား
သိတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ပြောပြပေးပါဦး
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ngwe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
13-04-2009, 02:44 AM
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ တုံတုံ၂၆ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, အောင်ကျော်မျိုး, centurymg, minthumon, moe san dar
13-04-2009, 07:21 AM
window movie maker နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ပါ ညီမရေ...
အပေါ်ကဟာတွေ ဒေါင်းမရဘူးဆိုတာ ဘာလို့ပါလိမ့်။
ifile လင့်ခ်တွေ အကုန်ကောင်းပါသေးတယ်။
ifile ကနေ မဒေါင်းတတ်တာဆိုရင် ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဖိုးတာတေ, ဖိုးထိန်, မိုးတိန်, လုလု, ဝင်းကျော်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, bonge, minthumon, moe san dar, thetzin, zero6